Ngwakọta Ka Mma. Pizza dị mma. Atụmatụ ọha na eze ka mma. | Martech Zone
Wenezdee, Machị 27, 2013 Douglas Karr
Cheta mmejọ okwu na eziokwu na abụba abụba na-enye iwu Pizza Hut na mbubreyo… ma jiri nlezianya gụọ nke a. Mgbe enweghị m ike ịnweta ngwa Pizza Hut iji rụọ ọrụ na iPhone m, agaghachiri m wee lelee nyocha ahụ.
Idem ama akpa mi ndikụt ata ediwak owo Ntinye kpakpando 1 na-ekwu otu okwu na achọtara m… ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ ma na-akụrisị. Ndi Pizza Hut amaghi mmadu ole na-eji igwe na ndi mmadu ole ha n’eme ka obi ju ha ike.
Yabụ, ebudatara m Papa John's iPhone App na nkeji mgbe e mesịrị Pizza m nọ n'ụzọ. Mgbe ahụ amalitere m ileba anya na mmiri iyi Twitter abụọ.
Pizza ụlọ na Twitter
Papa John na Twitter
Ya mere,… Pizza Hut na-eziga ahịa tweet mgbe ahịa tweet na ọ bụghị n'ezie na-eme ihe ọ bụla ahịa ọrụ mbipụta. Enweghị m ike ịgwa gị ụlọ ọrụ ole anyị na-akpọtụrụ na-ekwu ihe dị ka, "Oh, anyị ga-eji Twitter maka Marketing." anyị na-adọ ha aka ná ntị na onye ahịa ahụ achọghị ịma ihe ọ bụ gị ebumnuche bụ mgbe ha nwere nkụda mmụọ ma nwee nsogbu na ọrụ gị.
Ndị ahịa anaghị eche na a na-eji akaụntụ Twitter gị ka ịre ahịa ahịa Pizza… ha chọrọ ka mmadụ lekọta nsogbu ha. O doro anya na Pizza Hut enweghị nkọwa - ọ na-akụda mmụọ na ụlọ ọrụ buru ibu na-eleghara ohere ijere ndị ahịa ya mma. Nzaghachi ahụ dị n'elu mere ka ha kwụọ $ 50. 1 Tweet = $ 50.
Papa John's, n'aka nke ọzọ, nwere iyi Twitter jupụtara na retweets, nzaghachi, na mkparịta ụka ya na ndị na-ege ya ntị. O doro anya na ha anaghị ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụghị naanị dịka ọwa ahịa, kama ọ bụ ụzọ itinye aka na ịzaghachi ndị ahịa ha.
Ngwakọta Ka Mma. Pizza dị mma. Atụmatụ ọha na eze ka mma. Papa John.
Tags: papa johnspizzaelekọta mmadụ mediausoro mgbasa ozi ọha na eze
TweetSeeker: Chọta Gị Na-esote
O siri ike ikwere na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Pizza Hut agaghị ewepụta oge iji kpochapụ mkpesa ha ma lebara ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a anya. Ma eleghị anya, ha chere na ha ga-azụtali ya? Ma eleghị anya, ha na-eche ịza bụ ibu? Kedu ụzọ ọ bụla, o siri ike ịgọnahụ mmetụta dị mma nke usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ụlọ ọrụ dịka Papa-John. Eleghị anya Yum! Dị nwere ike itinye ụfọdụ ndị na-ere ahịa Social Media Taco Bell na ya?
Nke a bụ ihe egwuregwu na mgbasa ozi mmekọrịta, ebe ọhụụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ na-agbasa dị ka oke ọkụ na ụwa ịntanetị. Ọbụghị naanị nke ahụ, na-anabataghị ihe ahịa na-ekwu ọ bụghị naanị na-egosi atụmatụ na-adịghị mma, ma na-eleghara mkpa nke ndị ahịa ha anya. Kudos to Papa John, mgbe Pizza Hut dị onye ahịa ọzọ furu efu.
Amaara m na nke a abụghị isi okwu, mana gịnị kpatara na ị leghị nyocha ahụ tupu ibudata ngwa ahụ?
N'eziokwu, anaghị m atụkwasị obi nyocha. Ọ bụ usoro ịmara asọmpi mara nke ọma iji mee ka nyocha na-adịghị mma… Achọrọ m ịnwale onwe m. Nakwa, echetụbeghị m na ụlọ ọrụ dịka Pizza Hut ga-enwe ụdị ngwa ngwa iphone iphone!